युद्धको तयारीमा चीन ! के अब पछी हट्ला अमेरिका ? - Aarthiknews
काठमाडौँ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंगले आफ्नो सेनालाई युद्धको तयारी गर्न आदेश दिएका छन् । अमेरिका र चीन बिच तनाव उत्कर्षमा पुगेको बेला उन्ली यस्तो आदेश दिएपछि विश्व नै त्यसबाट तरङ्गित बनेको छ ।
चिनिया सेनाको समेत अध्यक्ष रहेका सीले १३ औँ नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेसको पिपल्स लिबरेसन आर्मी र पिपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्सको प्लेनरी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मङ्गलवार यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
सो क्रममा उनले सैनिकलाई तालिम मार्फत बलियो बनाउन र युद्धको लागि तयार रहन भनेका हुन् । चीनको सरकारी सञ्चार मध्यमहरूले उनले राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षा र देश समग्र सामरिक स्थिरताको रक्षा गर्नको लागी सेनाको प्रशिक्षणलाई व्यापक रूपमा बलियो बनाउनु महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
चीनबाट यस्तो समाचार त्यो बेला सार्वजनिक भएको छ जुन बेला अमेरिका चीनलाई उकास्ने र युद्धमा होम्ने हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ । त्यसो त साउथ चाइना सीमा लेजर गनको परीक्षण र ताइवान प्रति अनावश्यक चासो हालै अमेरिकाले सीमा नाघ्दै अगाडी बढाएका कदमहरू हुन् । जसको उचित जवाफ दिने चीनले जनाइसकेको छ ।
अमेरिकाको चीन बिच्काउने कदम
ताइवानमा राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन फेरी निर्वाचित भएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले उनलाई बधाई दिँदै ट्विट गरे- ‘डा. त्साई इंग-वेनलाई ताइवानको राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकालको लागि बधाई । ताइवानको जीवन्त लोकतन्त्र त्यो क्षेत्र र संसारको लागि एक प्रेरणा हो । राष्ट्रपति त्साईको नेतृत्वमा ताइवानसँग हाम्रो साझेदारी निरन्तर फल्ने-फुल्ने छ ।’
अमेरिकाको यो कदमबाट चीन नराम्ररी सँग भड्कियो । चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकालाई खुल्ला चेतावनी दिँदै भन्यो कि अब यसको बिरुद्द चीनले कडा कदम उठाउने छ । साथै भनेको छ- ‘अमेरिकाले यसको परिणाम भोग्नु पर्ने छ ।’
आइतबार मात्रै चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले पनि अमेरिकाले आफूहरूसँग शीत युद्ध गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कोरोना भाइरसको महामारी र हङकङमा चीनको नियन्त्रणका विषयमा अमेरिकाले दिइरहेको वक्तव्यबाजीले दुई देशबिचको सम्बन्ध नयाँ शीतयुद्ध सुरु हुने चरणमा पुगेको उनले बताए । हुनपनि चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको ताइवानमा अस्थिरता कायम गर्न र त्यसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न अमेरिका विगत ७० वर्ष देखी निरन्तर लागि परेको छ ।
त्यसो त व्यापार युद्धमा आफ्नो केही सिप नालागेपछी चीनलाई विश्वबाट अलग्याउने अमेरिकाले कोरोना भाइरस विश्वभर फैलाएको आरोप लगाइरहेको छ । सो काममा समेत सफलता मिल्न नसक्ने देखेपछि अहिले अमेरिका चीनलाई उत्तेजित पार्न अरू प्रयासहरूमा लागि परेको छ । त्यसैले उसले विभिन्न प्रोपोगान्डा मच्चाउने काम गरिरहेको छ । लामो समयसम्म मौन रहेको चीनले अमेरिकाले हद पार गरेपछि भने कडा प्रतिक्रिया दिन थालेको छ ।
अमेरिका-चीनबिच नयाँ शीत युद्ध
यो सँगै अब अमेरिका र चीन बिच शीत युद्ध शुरुभएको छ । अमेरिकाले चीनलाई कसरी तह लगाउने भन्ने योजना निर्माणका लागि दृष्टि पत्र (भिजन डकुमेन्ट) सार्वजनिक गरेपछि अब स्थिति धेरै नै गम्भीर बनेको छ । सो दृष्टि पत्रमा अमेरिकाले चीनलाई नियम र कानुनमा चलिरहेको विश्व व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधारा र हित अनुकूल बनाएको आरोप लगाएको छ । अनि अब स्वार्थको टकराबमा अमेरिका सामु देखा परेको चुनौतीको सिधा जवाफ दिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
'यूनाइडेट स्टेट स्ट्रेटेजिक एप्रोच टु द पीपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना' शीर्षक दिइएको सो पत्रमा ‘शीत युद्ध’ शब्दको उल्लेख गरिएको छैन तर अमेरिकाले योजना भने अब शीत युद्ध मै उत्रने तहमा गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू अमेरिकाले जारी गरेको यो पत्रलाई नयाँ शीत युद्धको घोषणाको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले चीनलाई धम्काउने र उद्देलित गर्ने उद्देश्यले मे १६ तारिकका दिन पहिलो पटक आफ्नो अत्याधुनिक लेजर गनको परीक्षण गरेको छ । अहिले संसार कै सर्वाधिक बडी तनावग्रस्त क्षेत्रका रूपमा परिचित साउथ चाइना सी मा नै अमेरिकाले यस्तो परीक्षण गरेको हो । जसलाई अमेरिकाले चीनलाई एक प्रकारले ललकारेको भन्न सकिने देखिन्छ । यो त्यो क्षेत्र हो जसलाई कहिले चीन त कहिले अमेरिकाले आफ्नो पकड क्षेत्र भन्दै घोषणा गर्ने गरेका छन् ।
त्यस अलावा त्यहाँका केही टापुहरूको स्वामित्वको विवादले कहिले जापान र चीन त कहिले अन्य मुलुकको चीनसँग ठाकठुक पर्दै आएको छ । तर, अहिले केन्द्रमा चीन-अमेरिका बिच नयाँ शीत युद्ध प्रारम्भको विषय छ । जसमा अमेरिका नराम्ररी फस्दै गएको देखिन्छ किनकि चीन यो अवस्थाको लागी २० वर्ष अघि देखि नै तयारीमा रहेको देखिन्छ ।
सन् १९९९ मा नै चिनियाँ हवाई फौजका कर्नेल किओं लिंग र वांग जियागसुइले एक पुस्तक सार्वजनिक गरे ‘अनरेस्ट्रिक्टेड वारफेयर : चाइनाज् मास्टर प्लान टु डीस्ट्रोय अमेरिका’ शीर्षकमा । जसमा उनीहरूले कसरी चीन अमेरिका माथि हाबी हुँदैछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अबको युद्ध रणनीतिमा फौजी भन्दा पनि अरू कुरा निर्णायक हुने त्यसैमा उल्लेख छ । जुन बेला सो पुस्तक प्रकाशित भयो त्यो समयमा चीन विश्व राजनीतिमा निकै पछाडि थियो । तर, उसको उत्पादन नीतिका कारण दुई दशकको अवधिमा उसले फेरी विश्वलाई दुई ध्रुवीय अवस्थामा पुर्‍यायो । जहाँ अहिले अमेरिका र चीन को एकल महाशक्ति बन्ने भन्ने होडमा लागि सके ।
चीनको शक्ति : अमेरिकी कमजोर उत्पादन क्षमता
अमेरिकाको उत्पादन क्षमता अन्त्यतै कमजोर रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । त्यसैले अमेरिकाले हालको अवस्थामा संसार कै सर्वाधिक ठुलो उत्पादक मुलुक बिरुद्द कसरी युद्ध लड्न सक्छ भन्ने प्रश्न नै अहिले अहम् बनेको छ ।
कोभिड-१९ यता कै कुरा गर्ने हो भनेपनि अमेरिकाको भेन्टिलेटर उत्पादन क्षमता कति रहेछ भन्ने देखियो । रुसले समेत उसलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो । यता चीन अहिले विश्वमा १४ सय भेन्टिलेटर चाहियो भने ११ सयवटा एक्लै आपूर्ति गर्न सक्ने गरी बसेको छ । यो अनुपातको चिनियाँ उत्पादन क्षमता अहिले देखियो ।
त्यसो त चीनको विकास गरेको यो स्तरको उत्पादन क्षमता तुरुन्तै कसैले हासिल गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । भारत, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश जस्ता ठुलो र सस्तो जनशक्ति भएको मुलुकले पनि अहिले नै विश्वलाई आपूर्ति गर्ने गरी उत्पादन बढाएर चीनलाई पछि पार्ने देखिँदैन । चीनको जति दक्ष जनशक्ति अहिले नै अरूसँग छैन ।
उता अमेरिका भने अहिले पनि आफ्नो सैन्य शक्तिको दम्भमा छ जबकि त्यो सेनाले दशकौँसम्म अफगानिस्तानमा बस्दा समेत तालिवानलाई जित्न सकेन र अहिले पुच्छर लुकाएर फर्कंदैछ । उता सिरियाका विद्रोहीलाई बुई बोक्यो तर अमेरिकी सेना त्यहाँ समेत नकाम प्रमाणित हुँदैछ । अहिले त्यही सेनाको आडमा चीनमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने योजनामा छ । तर, चीन भने यो कुरालाई कुनै समस्या नै मानिरहेको छैन किनकि उसको उत्पादन क्षमता यस्तो छ कि आफ्नो लागी आवश्यक कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिन चीन सक्षम छ ।
यो बेलाको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि के आजको विश्व चिनियाँ उत्पादनको प्रयोग बिना चल्न सक्ने अवस्थामा छ ? धेरैले त्यस्तो कल्पना नै गर्दैनन् । किनभने जति सस्तो मूल्यमा चीनले आफ्ना उत्पादन विश्व बजारमा पुर्‍याइरहेको छ त्यो क्षमता अरूमा देखिँदैन ।
भारतमा विदेशी कूटनीतिक निकायको झोला प्रयोग गर्दै सुन तस्करी, राजनीतिक विवाद शुरु
कम्बोडियामा कुकुरको मासुको व्यापारमा प्रतिबन्ध, मासु बेच्नेलाई १२ हजार डलरसम्म जरिवना
सुनको मूल्य अहिलेसम्म कै उच्च, तोलाकै ९२ हजार ४ सय पुग्यो
बैंकहरूले मात्रै दिए ऋणीलाई १५ अर्ब नगद छुट, सरकारको खोई ?